Ardayda Jaamacada SIMAD oo qalqal xoog leh galay kadib markii rag hubeysan ay gudaha u galeen Jaamacada!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ardayda Jaamacada SIMAD oo qalqal xoog leh galay kadib markii rag hubeysan ay gudaha u galeen Jaamacada!!
Ardayda Jaamacada SIMAD oo qalqal xoog leh galay kadib markii rag hubeysan ay gudaha u galeen Jaamacada!!
Nov 28, 2016WARAR
Ardayda wax ka barata Jaamacada SIMAD oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee jira magaalada Muqdisho ayaa maanta qalqal ku yimid kadib markii ay gudaha u galeen rag hubeysan oo rasaas ridaya.
Guddoomiyaha Jaamacada SIMAD Daahir Xasan Cabdi ayaa sheegay in rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya oo gaaraya ilaa 6 nin ay maanta gudaha u galeen xarunta jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho.
Gelitaanka ciidamadan gudaha ayaa waxaa ka timid kadib markii ardaydii gelinkii hore ay xisooyinkoodii dhamaysteen ayaa waxaa banaanka ay kula kulmeen rag hubeysan oo dareeska ciidamada xiran kuwaasoo dhac kula kacay.
Guddoomiyaha Jaamacada SIMAD Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab ayaa sheegay in aragagax badan uu ka dhashay arrintan ayna ku qasabtay in ardayda ay dariisahadaha ka baxaan taasoo qaar ka mid ah ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada ammaanka ayaa gurmad u sameeyay xarunta Jaamacada SIMAD hase yeeshee lama oga in ay ciidamada ammaanka ay cid u soo qabteen iyo in kale. Mana jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
Ardaydii gelinka dambe wax ka dhiganayay Jaamacada SIMAD ayaa maanta aysan qaadan xisooyinkii ay dhigan lahaayeen.
Jaad (Qaad) iyo Soomaalida Cun´ta inta ee wada socdaan waxii xunba ka filo masa ogtahay Qaadka in uu yahay Maandooriye ka awood badan qamriga iwm ah?.
Previous PostDiyaarad siday ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan koox Kubada Cagta Ciyaarta oo ku soo dhacday meel Buuraley ah Daawo Sawirro!! Next PostDaawo MUUQAAL: Axmed Macalin FIQI iyo Mas’uliyiin kale oo Xildhibaano unoqday Galmudug iyo HiirShabeele!!